Hindiya waxay samaysaa tijaabooyin COVID-19, karantiilid khasab ah dhammaan dadka Ingiriiska ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya waxay samaysaa tijaabooyin COVID-19, karantiilid khasab ah dhammaan dadka Ingiriiska ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Shuruudda cusub ayaa u muuqata in la soo bandhigay iyada oo laga jawaabayo tallaabooyin la mid ah kuwa Boqortooyada Ingiriiska ay ku soo rogtay muwaadiniinta Hindiya.
Hindiya ayaa ku tilmaantay go'aanka Britain ee ah inaysan aqoonsanayn nooca Hindida ee tallaalka AstraZeneca, oo loo yaqaan Covishield, "takoorid".
Muwaadiniinta UK ee la tallaalay ee yimaada Hindiya waxaa lagu qaadi doonaa karantiil khasab ah 10 maalmood.
Laga bilaabo Isniinta, dhammaan dadka imanaya UK waa inay soo bandhigaan tijaabo COVID-19 oo taban oo la qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor bixitaanka.
Sida muuqata ee loogu magac-daray, Saraakiisha Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Hindiya ayaa maanta ku dhawaaqay in dhammaan muwaadiniinta UK, oo ay ku jiraan kuwa si buuxda loo tallaalay, la marin doono karantiil khasab ah oo 10 maalmood ah markay yimaadaan Hindiya.
Shuruudda cusub ayaa u muuqata in la soo bandhigay iyada oo laga jawaabayo wax la mid ah tallaabooyinka lagu soo rogay muwaadiniinta Hindiya ee UK.
Ku dhawaaqista siyaasaddan cusub ayaa timid kadib markii xoghayaha arrimaha dibadda Hindiya Harsh Vardhan Shringla uu ku tilmaamay go’aanka Britain ee ah inaan la aqoonsan nooca Hindiya ee AstraZeneca Tallaalka, oo loo yaqaan Covishield, “takoorid”.
Wasiirku wuxuu ka digay tallaabooyinka is -weydaarsiga haddii London ay ku guuldareysato inay dib u eegto.
Laga bilaabo Isniinta, dhammaan dadka imanaya Ingiriiska-iyada oo aan loo eegin heerka tallaalkooda-waa inay soo bandhigaan tijaabo COVID-19 oo taban oo la qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor bixitaanka, waxay mari doonaan baaritaan labaad markay yimaadaan iyo siddeed maalmood ka dib.
Muddo karantiil khasab ah oo ah 10 maalmood ayaa sidoo kale la dhaqan gelin doonaa, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda.
Dowladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday bishii hore inay u oggolaan doonto socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay inay ka boodaan karantiilnimada oo ay qaataan baaritaanno yar, laakiin kaliya tallaalka la aqoonsan yahay ee hoos yimaada barnaamijyada Mareykanka, Ingiriiska ama Yurub ama kuwa ay oggolaadeen hay'ad caafimaad oo la oggolaaday.
In ka badan dhowr iyo toban dal oo ku yaal Aasiya, Kariibiyaanka iyo Bariga Dhexe ayaa liiskan galay, laakiin HindiyaBarnaamijka laguma darin. Sidoo kale, ma jirin barnaamij Afrikaan ah oo la aqbalay.
Intooda badan dadka Hindida ah waxaa lagu tallaalay hindisid AstraZeneca tallaalada, oo ay soo saartay Machadka Serum ee Hindiya. Qaar kale waxay qaateen COVAXIN, tallaal ay soo saartay shirkad Hindi ah oo aan laga isticmaalin Ingiriiska.
Diidmada Britain ee ah inay aqbasho shahaadooyinka tallaalka qaarkood waxay horseeday walaac laga qabo inay ka sii darto hakinta tallaalka.
Wadamadii ka helay dawladda Boqortooyada Ingiriiska boqolaal kun oo qiyaasood oo ah tallaalka AstraZeneca ayaa la yaabay sababta barnaamijyadooda tallaalka aysan ugu filnayn indhaha bixiyaha.